Saturday 20th April 15:18 Leg-spinner Graeme Cremer claimed four wickets for as many runs as Zimbabwe secured a crushing 335-run victory over Bangladesh in the first Test in Harare.	Zimbabwe skipper Brendan Taylor stands tall again as wickets tumble
Friday 19th April 17:08 Zimbabwe's seam attack bowled them into a strong position as 16 wickets fell on day three of the first Test against Bangladesh in Harare.	Bangladesh make strong start in response to Zimbabwe's 389
Thursday 18th April 17:14 Brendan Taylor made a career-best 171 in Zimbabwe's first-innings total of 389 on day two of the first Test against Bangladesh in Harare.	Zimbabwe captain Brendan Taylor led his side out of trouble on day one against Bangladesh
Wednesday 17th April 17:16 Brendan Taylor hit an unbeaten century as Zimbabwe reached 217-4 on day one of the first Test against Zimbabwe at Harare.	Black Caps break Zim hearts
Saturday 5th November 15:47 New Zealand took seven wickets in the final session to claim a thrilling 34-run win over Zimbabwe in the Bulawayo Test.	Bangladesh bounce back
Friday 19th August 17:20 Bangladesh avoided a tour whitewash with a much-needed win over Zimbabwe in the fourth one-dayer on Friday.	Dilshan destroys Zimbabwe
Thursday 10th March 16:14 Tillakaratne Dilshan scored a century and took four wickets as Sri Lanka beat Zimbabwe by 139 runs to confirm their quarter-final place.	Video